Auto Restart Error (Auto Restart ပြဿနာ) ~ (IT) ကိုထိုက်
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာဟာ ခဏတိုင်း Auto Restart ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ . . .
ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကြောင့် Auto Restart ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာသိချင်လာပါတယ်။ Auto Restart ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ . . .
1. ဗိုင်းရပ်ကိုက်ခြင်း ( Virus Infection )
2. ဆော့ဖ်ဝဲလ် မကိုက်ခြင်း ( Software Incompatible )
3. Registry မှားယွင်းခြင်း ( Corrupted registry )
4. BIOS လွဲမှားခြင်း ( Incorrect BIOS configuration )
5. System File ပျောက်ပျက်နေခြင်း ( Corrupted system files )
6. Mother Board ညစ်ပတ်နေခြင်း ( Dust on M.B )
7. CMOS Battery အားနည်းနေခြင်း
8. CPU Temperature မြှင့်တက်နေခြင်း ( Too much heat/temperature inside CPU box )
9. System Unit အတွင်း ချိတ်ဆက်ကြိုးများလွတ်နေခြင်း ( Loose Connection of Hardware Cables )
ဆိုပြီးတော့ အချက်9ချက်ရှိပါတယ်။ Auto Restart ဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းရာတွေတော့သိပြီးပြီ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရင်ရနိုင်မလဲ . . .
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Anti-Virus မနိုင်တဲ့ Virus ဆိုတာခပ်ရှားရှားပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော Anti-Virus ကိုသွင်းပြီး virus defination upto date ဖြစ်နေရင် Virus Clean လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ auto restart ပြဿနာကကင်းဝေးသွားမှာပါ။
2. ဆော့ဖ်ဝဲလ် မကိုက်ညီခြင်း ( Software Incompatible )
ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်က support လုပ်မပေးနိုင်လို့ auto restart ပြဿနာကို ဖြစ်ပေါ်စေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆုံးသွင်းခဲ့တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကို uninstallation ပြုလုပ်ပေးရုံဖြင့် စိတ်ပူပန်နေရခြင်းမှကင်းဝေးသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Registry မှားယွင်းခြင်း ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် registry ပြုပြင်တာထက် registry cleaner ကိုသုံးတာပိုသင့်တော်ပါတယ်။ Registry ဆိုတာက အမှားခံလို့မရတာကြောင့် registry cleaner ကို အသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။
4, 5, 6, 7, 8,9အချက်တွေကတော့ သာမန် User တစ်ယောက် အတွက် ပြုပြင်ရခက်ခဲနေမှာဖြစ်တာကြောင့်ဖော်ပြမပေးတော့ပါဘူး။ Hardware ပစ္စည်းတွေကိုကိုင်တွယ်ရာမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာရင် ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့အတွက် နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်။
Credit : http://ubagyun.blogspot.com